July Dream: October 2008
Halloween အထိမ်းအမှတ် စာမရေးဘူးလားလို့ အတွေးရပ်ဝန်းထဲက ဂဏန်းမလေး ဆုဝေက မေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ သရဲဇာတ်လမ်းတွေ ဘာသာပြန်တာ ခေတ်စားနေတယ်ဆိုပဲ။ YDC က လုပ်တဲ့ Youth Favourites 2008 ရဲ့ Theme တစ်ခုက Trick-or-Treat ပဲဆိုတော့ ရှေ့ကပို့စ်တွေမှာ အဲဒီအကြောင်းတွေကို ရေးခဲ့ပြီးသလို ခံစားနေမိတယ်။ တကူးတက ရေးစရာလည်း သိပ်မရှိပါဘူး။
အခုတလော အလုပ်က အတော်လေး များပါတယ်။ လူမှုရေးအလုပ်တွေလည်း အတော်ကို များခဲ့သလို ရုံးအလုပ်တွေလည်း များပါတယ်။ အားတဲ့အချိန် မရှိသလောက်ပါပဲ။ Blog တွေတောင် အရင်လို အားရပါးရ မလည်ဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Facebook ထဲက Trick-or-Treat ဆိုတဲ့ ဂိမ်းလေးကိုတော့ ဆော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဂီမ်းလေးက အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့ကတည်းက စ ဖွင့်ထားပါတယ်။ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ အထိပေါ့။ ကျွန်တော့်ကတော့ ၁၇ ရက်နေ့မှ စ ဆော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြားထဲမှာလည်း မဆော့ဖြစ်တာ များပါတယ်။ ဆော့ဖြစ်ရင်လည်း အကြာကြီး မဆော့ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဂိမ်းက အထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူး။ Facebook ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ တခြားလူတွေဆီကို လျှောက်လည်ရင်း အိမ်တံခါးခေါက်ရပါတယ်။ တံခါးပွင့်လာရင် တစ္ဆေလေးက မုန့်ဗန်းကြီးတစ်ခုခု ကိုင်ပြီး စောင့်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဘာတစ်ခုမှ မရှိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတလေ ကျရင် တစ္ဆေလေးက မုန့်လေး ကိုင်ပြီး စောင့်နေပေမယ့် တကယ်တမ်း ယူလိုက်တဲ့အခါ ဘာမှ ပါမလာတာလည်း ရှိပြန်ပါတယ်။ တချို့လူတွေဆီမှာ မုန့်တွေက ဒီအတိုင်း ယူလို့မရပါဘူး။ သူတို့ကို မုန့်ပြန်ကျွေးရတာ ရှိသလို လက်ဆောင် ပြန်ပေးရတာလည်း ရှိပါတယ်။ မုန့်တွေက ဈေးမကြီးပေမယ့် အဲဒီမုန့်နဲ့အတူ ရတဲ့ Trick-or-treat Points အမှတ်လေးတွေကို လိုချင်လို့ ဆော့ကြတာများပါတယ်။
Trick-or-treat Points အမှတ်တွေနဲ့ အရုပ်လေးတွေ အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အလှဆင်လို့ရပါတယ်။ အပေါ်ဆုံးမှာ ပြထားတဲ့ ပုံလေးက ကျွန်တော့် Facebook မှာ အလှဆင်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပွဲစဉ် အစအဆုံး ၁၉၅ မှတ် ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် Facebook ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ လမ်းအိုကလေး အီးမိုးရှင်းနယ် မမေက ၂၉၀ မှတ် ရပါတယ်။ နှင်းဆီနီနီ အိမ်မက်က ၂၆၇ မှတ် ရခဲ့ကြပါတယ်။ နှင်းဆီနီနီက ဒီတစ်ခေါက် ကျွန်တော်ထက် သာသွားလို့ အပျော်လွန်ပြီး ၀ိတ်လျှော့ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ယောဂကျင့်စဉ်လည်း လေ့လာနေတယ်လို့ ကြားမိပါတယ်။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Halloween အမှတ်တရလေး မရေးဘူးလား မေးလို့ ရေးလိုက်တာပါ။
စီးပွါးပျက်ကပ်ကြီး ဆိုက်နေတော့ တချို့အလုပ်တွေမှာ လူတွေ လျှော့တယ်။ တချို့တွေကျတော့ လခတော့ အလျှော့ခံရတယ်။ တချို့တွေကျတော့ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲပါပဲ။ ကိုယ်တွေ အလုပ်လည်း ဘယ်နေ့ ဘာတွေ ဖြစ်မလဲဆိုပြီး စိုးတထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲပေါ့။ သိပ်တော့ စိတ်မပူပါဘူး။ မြန်မာပြည်ရလည်း ထမင်းငတ်သေမယ့် လူမှ မဟုတ်တာ။ အမေရှိရင် ငွေရှိတယ်ပဲလေ။ အဟက်...
ဒီနေ့ ရုံးရောက်တော့ စီနီယာမန်နေဂျာက သူ့အခန်းထဲကို လာခဲ့ပါအုံးဆိုပြီး ဖုန်းလှမ်းဆက်တယ်။ ရုံးတက်တာ အမြဲနောက်ကျလို့ပဲ တရားဟောတော့မလားပေါ့။ ဟောလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကိုယ်က ညကြီးမိုးချုပ် အလုပ်လုပ်နေရတော့ မနက်စောစော မထနိုင်တာ မဆန်းပါဘူးလေ။ ဒီတော့ အေးဆေးပါဆိုပြီး သူ့အခန်းထဲ ၀င်သွားလိုက်တယ်။ သူက စာတစ်စောင် ထုတ်ပေးတယ်။ ရုံးနောက်ကျလို့ အလုပ်ပါ ဖြုတ်လိုက်တာလားပေါ့။ သူက ဖွင့်ကြည့်ပါလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ အဟဲ...
In recognition of your good performance, the Management has decided to promote you to Senior Consultant with effect from 1 October 2008, subject to the following:
ဆိုပြီး ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဟေး ဟေး... နိပ်သဟ ရှယ်ပဲ။ အလုပ်တောင် မပြုတ်တဲ့အပြင် ရာထူးပါ တိုးသွားသေးတယ်။ နောက် Pay Slip ထုတ်ပေးတော့ စာထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း လခကလည်း ပြောင်းနေပြီ။ အရင် လခထက် ၅၀၀ ကျော်လောက် ခုန်တက်သွားတယ်။
ဒီအလုပ်က စင်္ကာပူမှာ ပထမဦးဆုံး ၀င်လုပ်တဲ့ အလုပ်ပါ။ ၁ နှစ်ခွဲတိတိ ရှိတဲ့နေ့မှာ ရာထူးတိုးပေးခံရတာပါ။ ၀င်ကာစ ၆ လ အတွင်းမှာတော့ ဘာမှမလုပ်တတ် မကိုင်တတ်နဲ့ အတော်လေး ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဘာမှ မခိုင်းပဲ အလှထားထားတာ ၃ လ လောက်ရှိတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်က လူကြီးတွေ အလုပ်ထွက်ပြီး လူခဏခဏ ပြောင်းတော့ ကိုယ်လည်း ကြားလွတ် လွတ်နေပြီး အလုပ်ရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ မရှိခဲ့တာပေါ့။ ထမင်းသိုး ဟင်းသိုးလေး ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။
၁ နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာ ရုံးမှာ နေရာလေး ရလာခဲ့တယ်။ တရုတ်ပြည်ကနေ စလုံးမှာ အခြေလာစိုက်တဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာပေးမှုကြောင့်ပေါ့။ သူက အလုပ်တော်တော်များကို ကျွန်တော့်ကို တာဝန်ယူ လုပ်ခိုင်းတယ်။ သူ့ကျေးဇူးတွေကြောင့် အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ တောက်လျှောက်နီးပါး အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။ အတော်များများကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရလာတယ်။ အစက ပရောဂျက် ၃ ခုလောက်ပဲ ကိုင်ထားရတာကနေ အခုဆို ပရောဂျက် ၁၅ ခုလောက် လက်ထဲမှာ ရောက်နေပြီ။ စိန်ဗေဒါ ဆိုင်းတီးသလို လူလည်း ပတ်ချာလည်နေပြီ။ လက်သံလည်း ပြောင်လာတယ်။
ကျွန်တော့်ဌာနရဲ့ စီနီယာမန်နေဂျာကတော့ ပြောပါသေးတယ်။ နောက်ထပ် ရာထူးတစ်ဆင့် တိုးဖို့အတွက် ထပ်ကြိုးစားပါတဲ့။ အဖြေကတော့... ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပါမယ်ပေါ့။ အဲဒီ ရာထူးနောက်တစ်ဆင့် တိုးရင် ကောင်းတာတွေ ရှိသလို မကောင်းတာလဲ ရှိပါတယ်။ ကောင်းတော့ကောင်းတယ်... မျက်စိစပ်တယ် ဆိုတာမျိုးကြီးပေါ့။ ကောင်းတာကတော့ လခတိုးလာမယ်ပေါ့။ မကောင်းတာတစ်ခုက အလုပ်ထွက်ချင်ရင် ၂ လကြိုပြီး ထွက်စာတင်ရမယ့် နေရာကြီး ဖြစ်နေတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော့်နေရာက အလုပ်ပြောင်းချင်ရင် ၁ လကြိုပြီး စာတင်ရုံပါပဲလေ။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လခတိုး ရာထူးတိုးတဲ့အကြောင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ ကြွားချင်လို့ ကြွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ လက်ဖက်ရည်တိုက်ပါလို့ ပြောချင်တဲ့သူများ ကျွန်တော့်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ညစာစားပွဲတစ်ခုလောက် အရင်တည်ခင်းဧည်ခံပေးပါလို့ ဦးစွာပထမ ပြောကြားလိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဟဟ...
Posted by JulyDream at 12:20 AM9comments:
Posted by JulyDream at 6:26 PM 14 comments:
စနေနေ့ မနက် ၈ နာရီခွဲကျော်ကျော် အိပ်ရာထ၊ ရေမိုးချိုး၊ မနက်စာ အနည်းငယ် စားသောက်ပြီး ဘူတာကို ၉ နာရီခွဲလောက် ထွက်လာခဲ့တယ်။ အနီလိုင်းပေါ်ကနေပဲ သွားလိုက်တယ်။ Dohby Ghaut ဘူတာကို ၁၀ နာရီမခွဲခင် ရောက်တယ်။ ခရမ်းရောင် ဘူတာဘက်ကို လမ်းဆက်လျှောက်ခဲ့တာ ၁၀ နာရီခွဲလောက် Youth Favourites 2008 လုပ်တဲ့ နေရာကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ YDC Booth မှာ ရောက်ရှိကြောင်း သတင်းပို့လိုက်တယ်။ YDC က လူတော့ မစုံသေးဘူး။ တချို့တွေကတော့ နေ့လည်စာ သွားစားနေကြတယ်။ ရောက်ရောက်ချင်းမှာ Refreshment Area အတွက် Decoration ၀ိုင်းလုပ်ပေးပါတယ်။ ပင်ကူမျှင်တွေမှာ တပ်ဖို့ ပင့်ကူလေးတွေကို အမည်းရောင်အကျားလေးတွေ ဖြစ်အောင် အရောင်ချယ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အဲဒီ ပင့်ကူတွေကို ပင့်ကူမျှင်တွေမှာ လိုက်ထည့်ပါတယ်။ တချို့ကို စားပွဲပေါ်မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ တင်ထားပါတယ်။ ပိုနေတဲ့ ပင့်ကူတွေကို Form Fill Area နဲ့ Registration Area က စားပွဲတွေပေါ်မှာ သွားတင် ပေးထားလိုက်တယ်။ အဲဒါတွေအပြင် လိုအပ်တဲ့ ကုလားထိုင်တွေ ခင်းကျင်းမှုတွေကို ၀ိုင်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်။
မနက်ပိုင်းမှာ သွေးလာလှူတဲ့ လူက အတော်နည်းပါတယ်။ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လူလည်း နည်းပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဘူတာအထဲမှာ သွေးလှူပွဲအတွက် ခင်းကျင်းထားတဲ့ နေရာအစုံကို ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ Blood Buddy အရုပ်ကြီး အဆင်သင့်ဖြစ်တာနဲ့ ဘူတာထဲကနေ ပလာဇာစင်္ကာပူရဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ ITE က Nursing တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ ၂ ဦးလည်း အရုပ်ကြီးကို ခြံရံလို့ပေါ့။ သူတို့တွေက လက်ကမ်းစာစောင် ဝေငှရင်း ဘူတာထဲမှာ သွေးလှူပွဲရှိကြောင်း ပြောဆိုစည်းရုံးကြတာပေါ့။ ကလေးတွေကတော့ အရုပ်ကြီးကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ အရုပ်ကြီးနဲ့ တွဲပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ကြတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အတူပါလာကြတဲ့ လူကြီးမိဘတွေကို သွေးလှူဖို့ တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ အနီးအနားက ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာလည်း လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေငှကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်ဇူလိုင်က ဓါတ်ပုံဆရာပေါ့ဗျာ။
အပေါ်မှာ မိနစ် ၃၀ လောက် ကြာပြီးတဲ့နောက် အတော်ပူတာနဲ့ ဘူတာထဲကို ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဘူတာထဲမှာပဲ အရုပ်ကြီးကို ဟိုဟိုဒီဒီ လမ်းသလားခိုင်းထားလိုက်တယ်။ စက်လှေကားနဲ့ အတက်အဆင်း လုပ်နေတဲ့ လူတွေကို လက်ဝှေ့ယမ်း နှုတ်ဆက်ခိုင်းထားခဲ့တယ်။ အရုပ်ကြီး ဘေးနားမှာတော့ Volunteer ၂ ယောက်လောက် အကူသဘောမျိုး ထားပေးထားရပါတယ်။ ပိုစတာတွေ နဖူးစီးစာတန်းတွေ ချိတ်ထားပေးမယ် လူတွေက အဲဒီလောက်ထိ ဂရုမပြုမိကြဘူး။ အရုပ်ကြီးကျမှ သွေးလှူပွဲရှိကြောင်းကို သတိထားမိကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ Blood Buddy ကြီးကို HarbourFront NET Station ကို Fairies တို့ ၄ ယောက်အဖွဲ့နဲ့အတူ လွှတ်လိုက်တယ်။ အခြား လုပ်အားပေးဓါတ်ပုံဆရာတွေ ထပ်ရောက်လာတာနဲ့ သူတို့ကိုပဲ လွှတ်လိုက်ပြီး အဲဒီဘက်ကို ကျွန်တော် မလိုက်သွားတော့ဘူး။ စနေနေ့က လုပ်အားပေးတဲ့ Volunteer နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် Dohby Ghout မှာပဲ နေခဲ့တယ်။
Fairies တို့တွေ HarbourFront ကို ထွက်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း Form Filling, Registration နဲ့ Blood Collection ဘက်က Volunteer တွေကို လိုအပ်တာတွေ ၀ိုင်းကူပေးနေလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ YDC က နေရာတစ်ခုကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် တာဝန်မယူရပါဘူး။ Blood Drive Orgaizer ဖြစ်လို့ Overall ကို ကြီးကြပ်ပံ့ပိုးပေးရတာပါ။ သြော်... ပြောရအုံးမယ်။ Fairies လုပ်တဲ့ Volunteer က Raffles Secondary ကပါ။ သူ့မှာ အမွှာအစ်မ ရှိကြောင်း ကျွန်တော်က မသိဘူး။ နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် အကြာမှာ ကျွန်တော် Refreshment Area ကို တစ်ခေါက် ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သွေးလှူရှင်တွေကို ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးရင်းနဲ့ အနောက်နားက YDC Booth ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ Fairies လေးက YDCတီရှပ်လေး ၀တ်ထားပြီး လုပ်အားပေးနေတယ်။ အစောပိုင်းလေးကပဲ Blood Buddy အရုပ်ကြီးနဲ့ တစ်ဖွဲ့လုံးပါသွားတာ ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း ပြန်ရောက်လာတာလဲပေါ့။ အဲဒါနဲ့ သွားမေးကြည့်တော့ သူတို့က အမွှာညီအစ်မတဲ့ဗျာ။ တကယ့်ကို ချစ်စရာလေးတွေ။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလည်း ရှိလှတယ်။ မိဘတွေ တော်လို့နေမှာပါ။
HabourFront ကို သွားပြီး Recruitment လုပ်တဲ့အဖွဲ့ကြောင့် Dohby Ghout မှာ သွေးလာလှူတဲ့ သွေးလှူရှင် အတော်လေး များလာပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာ ထိုင်စောင့်နေရတဲ့သူတွေ မနည်းမနှောပါပဲ။ Form Filling မှာလည်း Form ဖြည့်နေတဲ့သူတွေ အများကြီး။ HB Test မှာလည်း ၆ ယောက် ၇ ယောက်လောက် စောင့်နေရတယ်။ သွေးလှူရမယ့် နေရာမှာတော့ ၁၅ ယောက်လောက် စောင့်ရတဲ့အထိ ဖြစ်လာကြတယ်။ သွေးဖောက်ယူတဲ့ ကုတင်တွေမှာ အနားယူတဲ့ သွေးလှူရှင်တွေကို အခြားသီးသန့် ကုတင်တွေပေါ်ကို ပြောင်းပြီး နားခိုင်းရတယ်။ ပတ္တီးစီးပေးဖို့ကို သွေးဘဏ်က Nurse တွေ မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ သွေးဖောက်တာ၊ သွေးအပ် ပြန်ဖြုတ်ရတာ၊ သွေးအိတ်သိမ်းရတာနဲ့ အလုပ်တွေ အတော်များကုန်တယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ ITE ကျောင်းက Nursing တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူတစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တော်ရယ် ၀ိုင်းပြီးကူပေးခဲ့လိုက်တယ်။ သွေးဖောက်ထားတဲ့ အပ်ပေါက်နေရာကို ဂွမ်းစလေးကပ်ပြီး ပတ္တီးစီးပေးတာလောက်တော့ ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာကတည်းက First Aid အောင်ထားတာပဲလေ။ ညနေပိုင်းတစ်ခုလုံး ပတ္တီးစီးလိုက်၊ ကျွေးမွေး ဧည့်ခံလိုက်၊ အမှတ်တရ လက်ဆောင်တွေ ပေးလိုက်နဲ့ အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေခဲ့လိုက်တယ်။ ဓါတ်ပုံကလည်း ရိုက်သေးတော့ ဟိုပြေးလိုက် ဒီပြေးလိုက်ပေါ့။
အဲဒီနေ့က သွေးလှူဖို့ Register လုပ်တဲ့လူက ၂၆၀ ကျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သွေးလှူဖြစ်တာက အယောက် ၁၆၀ ကျော်ပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့က ဟေမိုဂလိုဗင် သံဓါတ် မပြည့်တာနဲ့၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းတာနဲ့၊ သွေးပေါင်ချိန် တက်နေတာနဲ့ သွေးလှူခွင့် မရခဲ့ကြပါဘူး။ ညနေ ၅ နာရီခွဲကျော်တဲ့အထိ သွေးလှူလို့ မပြီးကြသေးပါဘူး။ နောက်ဆုံး ၆ နာရီခွဲကျော်မှပဲ ပြီးသွားတော့တယ်။ အဲဒါနဲ့ ခင်းကျင်းထားတာတွေကို ပြန်လည် ဖြုတ်သိမ်း ထုပ်ပိုးရပါတယ်။ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြန်သုံးရအုံးမှာဆိုတော့ MRT ထဲက စတိုခန်းမှာပဲ သွားသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ နောက် YDC အနေနဲ့ ဒီနေ့ တစ်နေ့တာကို ပြန်လည် သုံးသပ်ကြပါတယ်။ အခက်အခဲတွေ တင်ပြပါတယ်။ အဲဒီအခက်အခဲတွေကို တနင်္ဂနွေမှာ ဘယ်လို ပြင်ဆင်မလဲ ဆွေးနွေးပြီး အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတာ ည ၈ နာရီခွဲကျော်မှ အိမ်ရောက်ပါတော့တယ်။
Posted by JulyDream at 3:28 PM 1 comment:
ABOAB ဆိုတာ သွေးအုပ်စုကို ခေါ်တာပါ။ အေသွေး၊ ဘီသွေး၊ အိုသွေး၊ အေဘီသွေးကို ဆိုလိုချင်တာပါ။ Youth Favourites 2008 မှာတော့ fAiries, hoBbits, jack-O-lanterns & blAckBeards တို့ပေါ့။ Blood Buddy ဆိုတာက သွေးစက်ပုံစံ အရုပ်ကြီးကို ပေးထားတဲ့ အမည်လေးပါ။
Fairies လေးကို သရဖူဆောင်းပေးနေတာပါ။
Jack-O-lanterns နဲ့Blood Buddy
Fairies လေးရဲ့ အတောင်ပံလေး။
အပျိုတော် ၂ ယောက်နဲ့ Blood Buddy
Hello Blood Buddy!!!
Blood Buddy နဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ကြစို့...
Posted by JulyDream at 6:38 AM No comments:
Posted by JulyDream at 11:20 PM 22 comments:
ညခင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ ညွှန်းဖွဲ့ဆိုလို့ မရပါဘူး။ ဘ၀ရဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်တိုင်းမှာ ရယူပိုင်ဆိုင်တာတွေနဲ့အတူ စွန့်လွှတ် ပျောက်ကွယ်သွားတာတွေ ရှိစမြဲပါ။ ဒီလို ညခင်းတွေနဲ့ ကွဲကွာနေတာ ၂ နှစ်နီးပါး ရှိပါတော့မယ်။ ညခင်းက သူ့ဘာသာသူ တည်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီညခင်းက ကျွန်တော်နဲ့ ကံမဆုံလို့ တွဲမမိတာလေးပါ။ ကံဆုံအောင်လည်း ကျွန်တော် မကြိုးစားခဲ့ပါဘူး။
ဒီနိုင်ငံကို ရောက်လာတော့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားလာမှုနဲ့အတူ အထီးကျန်မှုတွေပါ တစ်ပါတည်း တွဲပါလာပါတယ်။ ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်း အများစုက မွေးရပ်မြေမှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ပေး အခြေအနေနဲ့ ပညာရေးတွေကြောင့် ဒီကိုလာဖို့ဆိုတာ လတ်တလောအချိန်မှာ အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီကို တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေသလို ကိုယ့်ထက် နှစ်ကာလ အရင်စောပြီး ရောက်နှင့်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေ အသိမိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ပြောမနာ ဆိုမနာ... ပိုးစိုးပတ်စက် ဆဲမနာ... အဆင့် သူငယ်ချင်းကတော့ ဘ၀မှာ အများကြီး မရှိသေးပါဘူး။ ပြောမနာ ဆိုမနာ ဆိုးတူကောင်းဖက် ဆိုတာ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ပေါင်းလာတဲ့ သူငယ်ချင်းမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး သင်တန်းတွေ တက်ရင်း ခင်မင်ရင်းနှီးရာကနေတဆင့် ပြောမနာ ဆိုမနာ အဆင့်ကို ရောက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ်က သူငယ်ချင်းအချို့လည်း ပြောမနာ ဆိုမနာတွေပါ။
အရင်တုန်းက ညခင်းတွေမှာ ပြောမနာ ဆိုမနာအဆင့် သူငယ်ချင်း အထီးအမတွေနဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျူရှင်ဆင်းတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်တတ်သလို ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကို တကူးတက သွားလည်ကြပြီး အနီးအနားက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ဦးတည်ချက်မရှိ ရောက်တက်ရာရာကို ဗလွှတ်ရှလွှတ် ပြောကြဆိုကြတယ်။ အချစ်အကြောင်းတွေ စာအကြောင်းတွေလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြောကြတယ်။ ပြောမနာ ဆိုမနာပါပဲ။
တခါတလေ ညခင်းမှာ အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို အတူတူသွားကြပါတယ်။ ဘုရားရှိခိုး ၀တ်ပြုပြီး စောင်းတန်းတစ်ခုမှာ ထိုင်ပြီး ဘုရားဖူးတွေကို ဟိုဟိုဒီဒီ ငေးကြတယ်။ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူနေမှုဘ၀တွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြတယ်။ ငြင်းကြခုန်ကြတယ်။ အနာဂတ်တွေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြတယ်။ မကျေနပ်ချက်တွေကို အန်ထုတ်ကြတယ်။ ခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ကြတယ်။ ပြောမနာ ဆိုမနာပဲပေါ့။
သို့ပေမယ့်လည်း ပြောမနာ ဆိုမနာ အဆင့်အထိ ရောက်လာပြီးမှ ဖောက်ပြန်သွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချို့က နာမည်ဂုဏ်သတင်းကြောင့် ဖောက်ပြန်သွားတယ်။ တချို့ကျတော့ ငွေရေးကြေးရေး လက်လွန်ကုန်ပြီး မျက်နှာပျက်ကုန်တယ်။ တချို့ကျတော့ စင်္ကာပူလို နေရာမျိုးကို မိဘဆွေမျိုး မောင်နှမတွေရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့ စောစော ရောက်လာပြီးနောက် ရုတ်တရက် မာန်တက်သွားတာလား ဘ၀င်မြင့်သွားတာလား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သေချာတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတာတစ်ခုက အရင်လို ပြောမနာ ဆိုမနာ သူငယ်ချင်း မဟုတ်တော့ပဲ နာတတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကတော့ ဒီကိုရောက်နေတာ ၃ နှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်... အလုပ် စ၀င်တာ ၂ ပတ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းရယ်... ကျွန်တော်နဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က တကူးတက တွေ့ကြရအောင် စကားပြောကြရအောင် ချိန်းဆိုတာနဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် လုပ်အားပေးဝင်နေတဲ့ ဘူတာမှာ သူတို့ လာစောင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စီတီးဟောဘူတာကနေ ဒူးရင်းသီးဘက်ကို လမ်းလျှောက် ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ လမ်းတစ်လျှောက် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတာပေါ့။ အခု တင်ထားတဲ့ပုံလည်း အဲဒီနေ့က ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။
နောက်ဆုံး စတည်းချတဲ့နေရာ... ငါးခြင်္သေ့ရုပ်တုအနား တံတားကြီးအောက်က စတားဘတ်ခ်ဆိုင်မှာ ည ၁၀ နာရီကျော်တဲ့အထိ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရောက်တက်ရာရာတွေ ပြောဖြစ်တယ်။ ကျောင်းတုန်းက ငယ်ဘ၀တွေကို စားမြုံပြန်ကြတယ်။ မိုးလင်းပေါက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး အားလူးဖုတ်ခဲ့တဲ့ ပေပေတေတေ ဂျစ်ပစီ ဘ၀တွေကို ပြန်လည်တမ်းတ လွမ်းဆွေးကြတယ်။ အခုချိန်မှာ ဘ၀တွေခြားနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ တချို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မကျေနပ်ချက်တွေကို ပေါက်ကွဲထုတ်ကြတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အကြောင်း အချစ်အကြောင်း မိသားစုအကြောင်း စုံပလုံစိပေါ့။ ပြောမနာ ဆိုမနာလေးပါပဲ။
အဲဒီလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ညခင်းမျိုး ကျွန်တော်အနားမှာ မရှိခဲ့တာ အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ စနေနေ့ကမှ ပြန်ရခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် လူမစုံပါဘူး။ မပြည့်စုံပါဘူး။ အရင်တုန်းက ဒီထက်မက လူစုံသလို ဒီထက်မက ပြောစရာတွေ များနေခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့...
Posted by JulyDream at 8:24 PM 18 comments:
Youth Favourites 2008 အတွက် Recruitment Drive ကို ဒီအပတ် စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေမှာ Dohby Ghaut NEL Station နဲ့ Harbour Front NEL Station မှာ တစ်ပြိုင်နက် လုပ်ပါတယ်။ ခရမ်းရောင်လိုင်းပေါ်မှာပါ။ နေ့လည် ၁၁ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိပါ။ လက်ကမ်းစာစောင်တွေ ဝေပါတယ်။ သွေးလှူချင်တဲ့သူတွေကို appointment အတွက် register လုပ်ပေးပါတယ်။ ၂ ရက်ပေါင်းမှာ သွေးလှူရှင် စုစုပေါင်း ၁၅၀ ကျော်လောက် စာရင်းပေးထားပါတယ်။
စနေနေ့မှာတော့ Dohby Ghaut NEL Station က Boothမှာ တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေမှာတော့ Harbour Front NEL Station မှာ YDC member တစ်ယောက်မှ မရှိတာနဲ့ Dohby Ghaut NEL Station မှာ နေနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို Booth Incharge အနေနဲ့ လွှတ်လိုက်လို့ အဲဒီမှာ သွားလုပ်ပေးရပါတယ်။ သေပြီဆရာပဲ။
နှစ်ရက်စလုံး Booth မှာ ထိုင်စရာနေရာမရှိပဲ ၆ နာရီနီးပါးလောက် မတ်တပ်ရပ် ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက် လုပ်လိုက်ရတာ လူလည်း အတော်လေး ပင်ပန်းပြီး သာခွေယိုင်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ညနေ ၅ နာရီထိုးတော့ ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပြခန်းကို ပြန်လည် ဖြုတ်ရ သိမ်းရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ရထားနဲ့ပဲ Harbour Front NEL Station ကနေ Dohby Ghaut NEL Station ကို ပစ္စည်းတွေကို ပြန်သယ်လာရပါသေးတယ်။ Incharge ဖြစ်လိုက်ရတော့ ကလေးတွေကို ပြန်ခိုင်းလိုက်ပြီး တစ်ယောက်တည်း အကုန်လုပ်လိုက်ရတာပေါ့။ အခုတော့ မီးစာကုန် ဆီခမ်းလို့ အိပ်ချင်နေပြီဗျာ။
ချစ်ချစ်ရှေ့မှာ ဟီးရိုးဖြစ်အောင် သွေးလှူမယ်ကွာ...
Dohby Ghuat မှာ တရုတ်မလေးတွေ ချစ်စရာ...
Harbour Front မှာ အမီနာတို့နဲ့ တီတီတာတာ...
Posted by JulyDream at 8:04 PM5comments:
Youth Donor Club ရဲ့ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါ ကျင်းပတဲ့ Youth Favourites အစီအစဉ်လေးကို အောက်တိုဘာ၂၅ ရက်နေ့နဲ့ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပပါမယ်။ စနေနေ့နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ နေရာကတော့ Dohby Ghaut MRT Station ခရမ်းရောင်လိုင်းပေါ်မှာပါ။ အချိန်ကတော့ နေ့လည် ၁၁ နာရီကနေ ညနေ ၅ နာရီအထိပါ။
အရင်က ရွေးထားတဲ့ Theme လေးက Halloween ပါ။ ဒါပေမယ့် Night Safari မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ Halloween ပွဲလေးကို စင်္ကာပူလူထုက မကောင်းမြင်တဲ့အတွက် အခုဒီပွဲကိုလည်း အဲဒီ Halloween အစီအစဉ်လေး မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ္ဆေ သရဲတွေနဲ့ တူအောင် လုပ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံတွေ အပိုဖြစ်သွားရှာပါတယ်။ အဲဒီ ကြောက်စရာ လန့်စရာ အရုပ်တွေအစား ချစ်စရာကောင်းတဲ့ လိပ်ပြာတောင်ပံနဲ့ နတ်သမီးတွေ၊ ဖရုံသီးနဲ့ ပင်လယ်ဒမြ ၀တ်စုံတွေကို အစားထိုး ၀တ်ဆင်ကြမှာပါ။ အမှတ်တရ လက်ဆောင်တွေ ပေးဖို့လည်း ရှိပါတယ်။ Theme ကလည်း ပြောင်းသွားပါတယ်။ Are you my Type? ဆိုပဲ။
အဲဒီနေ့မှာ လူငယ်တွေကို လူ့ဘ၀မှာ သွေးရဲ့ အရေးပါပုံ၊ သွေးလှူဒါန်းချင်စိတ် ရှိလာအောင် အသိပညာပေး စည်းရုံးသွားမှာပါ။ စိတ်ပါဝင်စားရင် သွေးလှူလို့လဲ ရပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာပဲ တစ်ခါတည်း သွေးလှူနိုင်ဖို့ Blood Donation Mobile Drive စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ အသက် ၁၆ နှစ်ကနေ ၅၅ နှစ်ကြား မည်သူမဆို သွေးလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိဘတစ်ဦးဦးရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို တောင်းခံဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးလှူဒါန်းချင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့တော့ ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ ပတ်စ်အပြင် ပတ်စ်ပို့စာအုပ်လေးပါ တစ်ပါတည်း ယူလာသင့်ပါတယ်။ နှစ်ရက်ပေါင်းမှာ သွေးအလုံးရေ ၄၀၀ အထိ စုဆောင်းနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
လူငယ်တွေ ဦးစီးလုပ်တဲ့ပွဲမို့လို့ ပျင်းစရာ မကောင်းတာကတော့ အသေအချာပါပဲဗျာ။ စိတ်ဝင်စားစရာ တခြားဘာတွေများ လုပ်အုံးမလဲဆိုတာကို သိချင်သေးရင်တော့ အဲဒီနေ့မှာ ကိုယ်တိုင်လာကြည့်လိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျို့။ ကဲ... Are you my Type?
Posted by JulyDream at 12:05 AM4comments:
Posted by JulyDream at 8:44 PM 21 comments:
Posted by JulyDream at 11:05 PM 14 comments:
Posted by JulyDream at 11:32 AM5comments:
Posted by JulyDream at 11:22 PM 15 comments:
Posted by JulyDream at 1:42 AM6comments:
Posted by JulyDream at 7:26 PM 11 comments:
သံယောဇဉ်နဲ့ တုပ်နှောင်မြဲခဲ့ …
ဆန္ဒလွန်ကဲ … စိတ်အလိုလိုက်လွဲ
လှုံ့ဆော်ကာ ကြေကွဲနေ …
တေးရေးဆရာက စိုင်းခမ်းလိတ်ပါ။ တေးဆိုက စိုင်းထီးဆိုင်ပါ။ လွှမ်းမိုးလည်း ဆိုဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော် Youtube မှာ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ သီချင်းကတော့ လွှမ်းမိုးဆိုထားတာပါ။ လွှမ်းမိုးအသံကျတော့ ငိုသံလေး ပါတယ်လို့ ခံစားရတော့ အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးဘ၀ကို ပိုပြီးလွမ်းစရာ ကောင်းသလားပဲ။ အွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြတာကတော့ အဲဒီသီချင်းဆိုပြီး သိပ်မကြာဘူး လွှမ်းမိုးတစ်ယောက် ကားတိုက်လို့ ဆုံးသွားပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် လွှမ်းမိုး နောက်ဆုံးဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလို့တောင် ပြောလို့ရမယ်ဆိုပဲ။
ကလေးဘ၀တုန်းက လူကြီးဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ အမြန် အရွယ်ရောက်ချင်တယ်။ မိဘဆီကနေ ခွင့်ပြုချက်မလိုပဲ လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်လို့ရအောင် သုံးချင်တာတွေ သုံးလို့ရအောင်ပေါ့။ အခုများတော့ လူကြီးဖြစ်လာပါပြီ။ အင်း... လူကြီး ဖြစ်ပြီလို့ ထင်ရတာပါပဲ။ အိမ်မှာအတူနေတဲ့ ကလေးတွေကတော့ ဦးဦးလို့ ခေါ်ကြတာဆိုတော့ လူကြီးပဲပေါ့ဗျာ။ လူကြီးဖြစ်တော့ ကလေးပြန်ဖြစ်ချင်လား ဆိုတော့... အဲဒီလိုမျိုးလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကလေးမှ ပြန်ဖြစ်လို့မရတာ သိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကလေးဘ၀က အပူအပင်ကင်းတဲ့ အချိန်တွေကို ပြန်တော့ လွမ်းမိသား။
အခုများတော့... လိုချင်တာတွေ နောက်ကို အချိန်ပေး ကြိုးစားလိုက်နေရတာ ပင်ပန်းတယ်လေ။ Nikon D90 လည်း လိုချင်ပြန် Nokia Handphone အကောင်းစားလေးလည်း ကိုင်ချင်ပြန်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လောဘရဲ့ သားကောင်ဘ၀ကို ရောက်လာမိတာပေါ့။ အရာရာကို ပူပန်တဲ့စိတ်နဲ့အတူ အားမလိုအားမရတွေဖြစ်ပြီး ဒေါသတွေကလည်း ရှိလာပြန်တယ်။ မာနကတော့ ဟိုးအရင်နဂိုကတည်းက ကြီးပြီးသားပါ။ ကလေးဘ၀နဲ့ လူကြီးဘ၀မှာ မာနကတော့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ထင်ရတာပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ပဲ အပူပေါ် အပူဆင့်ပြီး စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်လာရတော့ ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀မှာ အဲဒါမျိုးတွေ မရှိခဲ့တာကို တွေးရင်း တမ်းတလွမ်းမိပါတယ်။ လက်ရှိဘ၀ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ငြိမ်းအေးရာ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေ ပျောက်ဆုံးနေတာပေါ့။
အင်း... ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အချိန်ကြာညောင်းခဲ့သလို နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးလဲ ပျောက်ဆုံးနေပြီပေါ့ဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:48 PM 10 comments:
Posted by JulyDream at 11:42 PM 17 comments:
Posted by JulyDream at 11:34 PM4comments:
The Voice Journal 27-9-08
တစ်နေ့တစ်၌ ကျွန်ုပ်သည် တနင်္ဂနွေမနက်ခင်းတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ ဘယ်ဆီကိုမှ မထွက်ဖြစ်ဘဲ အိမ်မြဲကာ စာရေးစာဖတ်အလုပ်ကို လုပ်ရန် အရှိန်ယူ တာစူလို့နေပါ၏။ ကျွန်ုပ်၏ ချစ်ဇနီးဖျော်ပေးသည့် ကော်ဖီစိမ့်ခါးကို တစ်ငုံငုံလိုက်၊ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုတ်ကို တစ်ဖဲ့ဝါးလိုက်နှင့်ရှိကာ စားပွဲပေါ်တွင် အသင့်တင်ထားပါသော ယနေ့ထုတ် ဂျာနယ်များထဲမှ တစ်စောင်ကို လှန်လှောဖတ်ရှုနေဖြစ်ပါ၏။
ဂျာနယ်၏ စာမျက်နှာတစ်ခု အရောက်တွင်ကား သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်ုပ် စိတ်ဝင်စားသွားမိပါတော့၏။ သတင်းကား အခြားမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကာတွန်းရေးဖော်ကြီး သွားလေသူ ဆရာဆွေမင်း(ဓနုဖြူ)၏ ဇာတ်တစ်ပုဒ်ကို ဒီဗွီဒီအဖြစ် အသက်သွင်းမည့် အကြောင်းအရာသာ ဖြစ်ပါလေ၏။ ကိုဆွေမင်းကား လူသာသေသော်လည်း နာမည်မသေသည့် အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပေရာ ယခုမှာလည်း သူ၏ ဇာတ်လမ်းတွဲများထဲမှ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ ဖန်သားပြင်ပေါ်သို့ ထပ်မံသက်ဝင် လှုပ်ရှားရောက်ရှိ လာအုံးမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်ရပါပေ၏။
ဆရာဆွေမင်း(ဓနုဖြူ)၏ မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီ ကား မြန်မာပြည်တစ်လွှား လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် အမှန်အကန်ကို ကျော်ကြားခဲ့သူဖြစ်ပါ၏။ တွတ်ပီသာမက မသေးမျှင်၊ ဗိုက်ကလေး၊ သူကြီးဘစီ၊ လူပျိုကြီး စောတင်မောင်၊ ကျောကင်းဆရာလေး ကြည်နိုင်၊ အတီး စသည့် ဇာတ်ကောင်များသည်လည်း တွတ်ပီနည်းတူ ပရိသတ်ရင်ထဲ စွဲနေဆဲ ဇာတ်ကောင်များသာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကာတွန်းရုပ်ပြ ဇာတ်လမ်းများကို ကမ္ဘာမှာရော... မြန်မာမှာပါ ပိတ်ကားပြင်ပေါ် အသက်သွင်းခဲ့ကြသည်မှာ ကာလရှည်ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါ၏။ ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလျှင် ကာတွန်းရုပ်ပြမှ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကောင်များ ဖြစ်သွားကြသည်မှာ များပြားလွန်စွာ ရှိပါ၏။ အနီးဆုံး ဥပမာကား စူပါမင်းန်၊ ဘတ်မင်းန်၊ စပိုက်ဒါမင်းန် တို့ ဖြစ်ပါ၏။
ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ပြများကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းကြသည့်အခါ ဒါရိုက်တာများမှာ သေသေချာချာ စနစ်ကျစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါ၏။ သရုပ်ဆောင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်အား အနှီနာမည်ကျော် ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်၏ ပုံသဏ္ဍန်အတိုင်းကို တဝေမတိမ်း ထပ်တူထပ်မျှ ဒီဇိုင်းထုတ် ၀တ်ဆင်စေကာ မျက်နှာကိုလည်း မူလဇာတ်ကောင်အတိုင်း အတိအကျ ခြယ်သကြပါ၏။ ထိုရောအခါ မူလဘူတ ကာတွန်းရုပ်ပြ ဇာတ်ကောင်မှာ စာအုပ်ထဲမှ သက်ဝင်လှုပ်ရှားပြီး သကာလ ပိတ်ကားပေါ် အကျအန ရောက်ရှိသွားသလိုပင် ဖြစ်ပါတော့၏။ စာအုပ်နှင့် ရုပ်ရှင် မီဒီယာမတူစေကာမူ သူ၏ မူလအရသာမှာကား လုံးဝ တစ်သားတည်းသာ ဖြစ်ပါတော့၏။
ထိုနည်းတူစွာ ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်း သာဓကများစွာ ရှိခဲ့ပါပေ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်ငယ် လူမမယ် အရွယ်ကဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆရာကြီး ကာတွန်းအောင်ရှိန်မှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် ဖြစ်ခဲ့ကာ သူ၏ ကာတွန်းဇာတ်လမ်း များစွာမှာလည်း ငွေရောင်ပိတ်ကားထက်တွင် အမြဲပင် အသက်ဝင်ခဲ့ပါ၏။ စီစဉ်ညွှန်ကြား ရိုက်ကူးသည့် ဒါရိုက်တာကြီးများကော သရုပ်ဆောင်မည့် မင်းသား မင်းသမီးများပါ မူလဇာတ်ကောင်၏ ကာရိုက်တာကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါလေ၏။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ဆရာဦးအောင်ရှိန်၏ ဦးရှံစား၊ ဦးဒိန်းဒေါင်ကို လူရွှင်တော် မင်းသားကြီး သန်းနွဲ့နှင့် မြင့်ဖေတို့က သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးခဲ့ကြရာ (ဦး)သန်းနွဲ့မှာ မူလ ဦးရှံစားပုံစံအတိုင်း မောင့်ကျက်သရေ ခေါင်းပေါင်း၊ တိုက်ပုံနှင့် ပါးစပ်တွင်လည်း ဦးရှံစားအတိုင်း ဆေးတံအိုးအကြီးကြီးကို အမြဲကိုက်လျှက် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါ၏။ ဦးဒိန်းဒေါင်ဖြစ်သော (ဦး)မြင့်ဖေမှာလည်း ဦးဒိန်းဒေါင်အလား ဆံပင်ကို အလည်တည့်တည့်ခွဲလျက် တစ်ဖက်ကား အနက်၊ တစ်ဖက်ကား အဖြူ ဆေးဆိုးကာ ပုဆိုးမှာလည်း ကာတွန်းထဲကအတိုင်း ပတ်လည်အစင်းကြားကြီးနှင့် ဖြစ်ပါ၏။ ရဲကြီးလုပ်သူ ဦးအုန်းခွေမှာလည်း တကယ့် ဦးအုန်းခွေ ပါပေ။
ထိုနည်းတူစွာ ဆရာဦးအောင်ရှိန်၏ တောတွင်းသား ကြာဆံကို ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းခဲ့ကြပြန်ရာ ကြာဆံအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သူ ဦးအုန်းမောင်မှာ ကြာဆံပုံစံအတိုင်း ပခုံးတစ်ဖက်ဖော် ကျားသစ်ရေ ၀တ်စုံနှင့် ခါးပတ်အိတ်တွင် လောက်လေးခွနှင့်ဖြစ်ကာ ကြာဆံ၏ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးသော ကျီးကန်း နှုတ်သီးသဏ္ဍာန် ဆံပင်ပုံစံကို အမိအရ ပုံစံတူပြုလုပ်ကာ ခေါင်းထက်တွင် တပ်ဆင်ကာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါပေ၏။ အကျိုးဆက်ကား ဦးအုန်းမောင်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ကြာဆံအုန်းမောင် ဟု အမည်တွင်ခဲ့ပါတော့၏။ ဤကား မူလဘူတ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်များနှင့် ပိတ်ကားပေါ်ရောက် ကာရိုက်တာတို့၏ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်မှုသာ ဖြစ်ပါ၏။
ယခုလည်း ရှေးနည်းတူစွာ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်မှနေ၍ ဖန်သားပြင်ထက် သက်ဝင် လှုပ်ရှားလာတော့မည့် တွတ်ပီကို မြင်ယောင်မိပါ၏။ တွတ်ပီကား ကာတွန်းဆရာ၏ ရင်တွင်းစိတ်ကူး စေတနာများမှ ပေါက်ဖွား ရှင်သန်ခဲ့သော ကာရိုက်တာတစ်ခုပါလေ။ ဆံပင်မရှိသော ဦးပြည်းပြောင်ပြောင်၊ ၄င်းပေါ်တွင် အလွန် သေးငယ်သည့် ဦးထုပ်ကလေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်ကား စွပ်ကျယ်အဖြူ လက်စကနှင့် နှစ်လုံးပြူးကျည်များကို စလွယ်သိုင်းကာ ခါးဝတ်ပုဆိုးကိုကား ခါးတောင်းကျိုက်ထားပါ၏။ အောက်ပိုင်းတွင်ကား မိုးထဲရွှံ့ထဲစီး လည်ရှည်ဖိနပ် အနက်ကြီးနှင့်ဖြစ်ကာ အမြင့်မတင့်တယ်စွာ ပုံကို မြင်ရတာနဲ့တင် ရယ်ချင်စရာ ကာရိုက်တာပါပင်။
ဤသို့သော ထူးခြားဆန်းပြားသည့် ကာရိုက်တာပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကို ကာတွန်းဆရာသည် ဘယ်နှလ၊ ဘယ်နှနှစ်၊ နေ့ပေါင်းများစွာ ညပေါင်းများစွာ စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့ရပါသနည်း။ လူအများကြား ထင်းခနဲနေအောင်၊ လူအများကြား ရှင်းခနဲနေအောင် သရုပ်ဆောင်မည့် အနှီကာတွန်းရုပ်ကလေးများကား ကာတွန်းဆရာ၏ ရင်နှစ်သည်းချာ သားသမီးရတနာများသာ ဖြစ်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်လည်း ဂျာနယ်ပါ မြိုင်ရာဇာကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုဖြစ်ခဲ့ပါ၏။ မြိုင်ရာဇာသတင်းပါ ထွန်းအိန္ဒြာဗို၏ အင်တာဗျူးကို ဖတ်ခွင့်ရပါ၏။ သူသည် သူ၏ဒီဇိုင်နာ လတ်လတ်ထံမှာပဲ ဇာတ်ဝင်ခန်းများအတွက် အမြဲတမ်း ချုပ်ပါကြောင်း ပြောဆိုပြီးသကာလ... "အခုလည်း မသေးမျှင် ဇာတ်ကောင်အတွက် ကာတွန်းထဲက ပုံစံနဲ့ တစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင် ထဘီအဆင်တွေကအစ သေသေချာချာရွေးပြီး ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မသေးမျှင်လို ဖင်(တင်) အကြီးကြီးဖြစ်အောင် သေချာပြင်ဆင်ပြီး ချုပ်နေပါတယ်" ဟု ဆိုပါလေ၏။ သြော်... ကောင်းလေစွ... ကောင်းလေစွ။
ကျွန်ုပ်လည်း ဖတ်လက်စဂျာနယ်ကို အသာချ၍ မျက်စိကို ခေတ္တအနားပေးကာ စဉ်းစားနေပါ၏။ ပြီးသော် လက်ကျန်ကော်ဖီကို အပြတ်ရှင်းကာ နောက်ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို လှန်လှောမိပါ၏။ အနှီ ဂျာနယ်မှာလည်း မြိုင်ရာဇာ သတင်းပါပါလေ၏။ သို့နှင့် ဤသတင်းကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ဖြစ်ရာ တွတ်ပီအဖြစ် သရုပ်ဆောင်မည့် မင်းသားကား ခေါင်းပေါ်မှာ ဘိုကေလှတပတနှင့် ဖြစ်ပါ၏။ ဦးထုပ်သေးသေးလေးကို စောင်းဖို့ဝေးစွ လုံးဝချန်ထားကာ ခါးတွင်လည်း မူလဇာတ်ကောင်တွင် မပါရှိသည့် စစ်ခါးပတ်ပြားကြီးကို ပတ်ထားပါ၏။ ပုဆိုးကိုဖြန့်၍ တိုတိုဝတ်ထားလျက် အောက်ဘက်မှာကား စစ်သုံး ဂျင်းဂန်းဘုရှ် အစိမ်းနှင့် ဖြစ်ပါ၏။
မသေးမျှင်ကား လင်အသစ် ရထားပေပြီထင့်။
အပေါ်က ဆောင်းပါးလေးက ဘယ်မင်းသားကို ရေးမှန်း မသိမှာစိုးလို့ ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်က သတင်းလေးပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဆွေမင်း(ဓနုဖြူ)ရဲ့ဇာတ်လမ်းကို ဇာတ်ညွှန်းကိုမြင့်အောင်က 'ထာဝရ အလင်းတန်း' ဒီဗီဒီဇာတ်ကားအဖြစ် ဇာတ်ညွှန်းခွဲထားပေးပြီး ဒါရိုက်တာထွန်းအောင်ဇော်က ရိုက်ကူးနေတာပါ။ တွတ်ပီအဖြစ် လူမင်း၊ ဗိုက်ကလေးအဖြစ် ဖိုးချစ်၊ မသေးမျှင်အဖြစ် ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ သူကြီးဘစီအဖြစ် မိုးဒီနဲ့ ရွာမှ အပျိုလေး ပုဆွဲမိအဖြစ် ဇူးဇူးမောင်တို့က သရုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။
ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှာ လူမင်းကို အင်တာဗျူးလုပ်ထားတာလေးကတော့...
တွတ်ပီဇာတ်ရုပ်အတွက် ဘယ်လိုပြင် ဆင်ထားလဲ။
တွတ်ပီနေရာမှာ ဘယ်လို သရုပ်ဆောင်မလဲလို့ အစ်ကိုစဉ်းစားတယ်။ တွတ်ပီလို ခေါင်းတုံးလေးတုံးပြီး ဦးထုပ်သေးသေးလေး ဆောင်းထားရုံနဲ့ အစ်ကို တွတ်ပီဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွတ်ပီဖြစ်အောင် ကိုယ့်ကာရိုက်တာနဲ့ကိုယ်လုပ်မယ်ပေါ့။ ဘွတ်ဖိနပ်စီးတယ်။ နှစ်လုံးပြူးပါမယ်။ တွတ်ပီရဲ့ အငွေ့ အသက်တွေ အကုန်လုံးတော့ပါမယ်။ တစ်ပုံစံတည်း ထပ်တူတော့မကျဘူး။
ဒီပို့စ်မှာကျွန်တော်က ထပ်ဖြည့်ပြီး ပြောချင်တာကတော့...
ကျန်စစ်သားလည်း မယားလေးယောက်ယူတဲ့ မဟာနှာဘူးကြီးဖြစ်အောင် မင်းကျန်စစ်မှာ လုပ်ခဲ့တာတောင် အားမရသေးလို့ ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘ၀တင်မက လူလတ်ပိုင်းအရွယ်မှာလည်း ဖတ်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ကာတွန်း ဇာတ်လိုက်ကျော် မြိုင်ရာဇာတွတ်ပီကိုပါ ဖျက်ဆီးဖို့ လုပ်နေတာတော့ မကြိုက်ဘူးဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:56 PM 33 comments: